Hordhac: Man City Vs Arsenal: Arsene Wenger & Pep Guardiola Oo Doonaya In Ay Markii Ugu Horaysay Kor U Qaadaan Carabao Cup-ka – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Man City Vs Arsenal: Arsene Wenger & Pep Guardiola Oo Doonaya In Ay Markii Ugu Horaysay Kor U Qaadaan Carabao Cup-ka
Pep Guardiola ayaa bartilmaameedsanaya koobbkiisii ugu horeeyay ee kooxda Man city isaga oo ay kooxdiiu la ciyaari doonto Arsenal finalka Carabao Cup kulan ka dhici doona Wembley.
Arsene Wenger ayaa dhankiisa raadinaya in uu koobkan ku guulaysto markii ugu horaysay muddo 22 sano ah oo uu raadinayay in uu ku guulaysto.
Labada kooxood ayaa ku soo gali doona shaxdooda ugu adag iyada oo ay koox kasta isha ku haysa in ay ku guulaysato koobkeedii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan.
Kulanka: Man City Vs Arsenal
Tartanka: Caraboa Cup Final
Wakhtiga: 7:30 Habeenimo
Kan ayaa ah Finalkii 8-aad ee Carabao cup-ka ee Arsenal- waana koox ugu badan ee laga badiyay finalka taariikhda tartanka 5 jeer iyada oo tartanka ku guulaysatay laba jeer 1987 iyo 1993.
Manchester City ayaa ciyaari doonta markii 6-aad Finalka Carabao cup-ka waana markii 3-aad ee 5-tii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay waxa ay tartanka ku guulaysteen 4 jeer 5-tii final ee ugu dambaysay ee ay ciyaareen.
Man City ayaa laga badiyay hal kulan oo ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Arsenal tartamada oo dhan, iyaga oo AArsenal uga badiyay 3/1 kulan premier League ahaa ee xilli ciyaareedkan,Tartanka Carabao cup-ka City ayaa badisay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay kooxda Arsenal.
Arsenal ayaa dhalisay kaliya lix gool oo Carabao cup-ka ah xilli ciyaareedkan waana kooxdii ugu goolasha yarayd ee gaarta Finalka taariikhda Tartanka.